အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြည်ပရောက် နီပေါနွယ်ဖွားများအဖွဲ့၏ သတ္တမအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြည်ပရောက် နီပေါနွယ်ဖွားများအဖွဲ့၏ သတ္တမအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း
(၇-၇-၂၀၁၉ ရက်၊ ရန်ကုန်မြို့)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ၇-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့ (ဝ၉၀ဝ) နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Chatrium Hotel Royal Lake ၌ နီပေါနိုင်ငံ သံရုံးနှင့် ပြည်ပရောက်နီပေါနွယ်ဖွားများအသင်း (Non-Resident Nepali Association NRNA) တို့ ပူးတွဲကြီးမှူးကျင်းပခဲ့သည့် ပြည်ပရောက် နီပေါနွယ်ဖွားများအသင်း၏ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ သတ္တမအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်၍ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အခမ်းအနားတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားရာ၌ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်ပရောက်နိုင်ငံသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် မိခင်နိုင်ငံအတွက်သာမက ၎င်းတို့အခြေချနေထိုင်ရာ အိမ်ရှင်နိုင်ငံအတွက်ပါ အရေးပါကြောင်း၊ ၎င်းတို့၏ အတတ်ပညာ၊ စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အခြားအရင်းအမြစ်များကို ထိရောက်စွာ အသုံးချခြင်းအားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာမိခင်နိုင်ငံများအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ နီပေါနွယ်ဖွားများအပါအဝင် ပြည်ပရောက်နီပေါနွယ်ဖွားများအနေဖြင့် ရောက်ရှိနေထိုင်ရာ အိမ်ရှင်နိုင်ငံအသီးသီးတွင် ဒေသခံလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် သဟဇာတရှိစွာ နေထိုင်လျက်ရှိကြပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြသည်ကို ဝမ်းမြောက်ဖွယ် သိရှိရကြောင်း၊ မြန်မာ-နီပေါ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့်ရာတွင်လည်း ပြည်သူလူထုချင်း ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးသည် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်း စသည်ဖြင့် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ယင်းအခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အတူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး နီပေါနိုင်ငံဘက်မှ နီပေါနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း H.E. Dr. Prakash Sharan Mahat ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နီပေါသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Bhim K. Udas နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ နီပေါနွယ်ဖွားများ၊ ပြည်ပရောက် နီပေါနွယ်ဖွားများအသင်းမှတာဝန်ရှိသူများ အပါအဝင် အခြားဒေသများမှ ပြည်ပရောက် နီပေါနွယ်ဖွားများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ စုစုပေါင်း (၃၀ဝ)ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ပြည်ပရောက် နီပေါနွယ်ဖွားများအသင်းကို ၂၀ဝ၃ခုနှစ်က စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်ပရောက် နီပေါနွယ်ဖွားများအနေဖြင့် နီပေါနိုင်ငံနှင့် အိမ်ရှင်နိုင်ငံများအသီးသီးတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တစ်တပ်တစ်အား ဆောင်ရွက်ကြရေးအတွက် ဦးတည်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ယင်းအသင်းသည် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသရှိနိုင်ငံများတွင် ပြည်ပရောက် နီပေါနွယ်ဖွားများဆိုင်ရာ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးများကို အလှည့်ကျကျင်းပလျက်ရှိရာ ယခင်နှစ်များအတွင်း ကွာလာလမ်ပူ၊ ဟောင်ကောင် စသည့် အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွင်း မြို့ကြီးများတွင် အလှည့်ကျကျင်းပခဲ့ကြောင်းနှင့် ယခုအကြိမ် ဒေသတွင်းအစည်းအဝေးသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။